Grunge သည် hardcore punk နှင့် heavy metal ၏ အစိတ်အပိုင်းများရောနှောထားသည်။ ဂီတသည် punk ဂီတ၏ raw sound များပါဝင်ထားပြီး စာသားများမှာ ဆင်တူသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ နှေးသော tempo များ၊ မညီညာသော ဟာမိုနီများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော တီးခတ်ပုံများ ပါဝင်သည်။ heavy metal ကို ပြန်လည်းတွေးတောထားသည်။ စာသားများမှာ လောကကို စိတ်ပျက်မှုများကို ရေးစပ်ထားသည်။
Some bands associated with the တစ်ချိုတီးဝိုင်းများသည် အမျိူးအစားနှင့် ဆက်နွယ်ခဲ့သည်။ Soundgarden, Pearl Jam နှင့် Alice in Chains တို့ဖြစ်ပြီး label သို့လက်ခံရန် အသင့်မဖြစ်သေးချေ။ Rock and Roll အစား ရည်ညွန်းရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
grunge၏အသံများမှာ အခြားဂီတအဖြစ်အပျက်များမှ music Seattleမှ ဖြစ်သည်။ Sub Popမှ Jonathon Poneman ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “Seattleသည် တက်ကြွနေသာဂီတဖြစ်ရပ်နှင့်အတူ ပြည့်စုံသော ဥပမာဖြင့် ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သည်။ American မီဒီယာများမှ မသိကျိုးကျွံပြုသည်။ Mark Arm ထောက်ခံထားသည်မှာ “အခြားစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ဆုတ်ဖြဲထားသည်ဟုဆိုသည်။ grungeသည် local punk rockဖြစ်ရပ် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ လှုံဆော်ခဲ့သောတီးဝိုင်းများမှာ The Fartz, The U-Men, 10 Minute Warning, The Accused နှင့် Fastbacksတို့ဖြစ်သည်။ Melvinsတီးဝိုင်း၏လေးလံနှေးကွေးသော sludgyပုံစံများမှာ grunge sound တွင် လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
အမျိုးအစား၏ punkနှင့် alternative rock အရင်းအမြစ်မှ သွေဖယ်၍ grunge တီးဝိုင်းများသည် ၁၉၇၀အစောပိုင်းတွင် heavy metal အပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ “Babylon’s Burning From Punk to Grunge ၏စာရေးဆရာ Clinton Heylonက Black Sabbath ကိုကိုးကား၍ “ အနောက်မြောက်ဖြစ်ရပ်တွင် pre-punk လွှမ်းမိုးခဲ့ပါလိမ့်မည်။ Black Sabbathသည် သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် recordများကို ဖြတ်လျက် grunge sound ကို ပုံဖော်ခဲ့သည်။ ဂီတဗေဒပညာရှင် Bob Gulla Black Sabbath ၏အသံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားသည်မှာ grunge ၏အကျော်ကြားဆုံးတီးဝိုင်းများတွင် အကျိုးလုံးဝသက်ရောက်စေသည်။ Nivana, Soundgardenနှင့် Alice in Chains တို့ ပါဝင်သည်။ Led Zeppelin ၏လွှမ်းမိုးမှုကို Soundgarden ၏အလုပ်တွင် တွေ့ရသည်။ Guitar World တွင် Jon Wiederhorn ပြောကြားသည်မှာ တိကျတဲ့ grunge ဆိုတာဘာလဲ။ Creedence Cleanwater Revival, Black Sabbath နှင့် the Stoogesတို့ဟာ တော်တော်လေးနီးစပ်ပါတယ်။ Los Angeles hardcore punk တီးဝိုင်း Black Flag ၏ ၁၉၈၄ My War album သည် heavy metal နှင့် သူတို့၏ traditional sound များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Seattleတွင် ပြင်းထန်သော ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်သည်။ Mudhoney တီးဝိုင်းမှ Steve Turner ပြေထားသည်မှာ “နိုင်ငံရှိလူတော်တော်များများဟာ Black Flagကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တကယ်ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ တကယ်ဆန်းကြယ်တဲ့အသံတွေပါပဲ။ တီးဝိုင်းများသည် ၁၉၈၄တွင် Seattle ဂီတဖြစ်ရပ်တွင် metalနှင့် punk ကိုစတင်၍ ရောနှောခဲ့သည်။
noise rockတီးဝိုင်းအချို့၏ raw, distortedနှင့် feedback- intensive အသံများသည် grunge အပေါ်လွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ ထိုကြားထဲတွင် Wisconsin မှ Killdozerနှင့် San Franciscoမှ Flipper တို့ပါဝင်သည်။ Butthole Sufers တီးဝိုင်း၏ punk, heavy metalနှင့် noise rock တို့ ရောနှောထားသည်မှာ အဓိကလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်။ ဩစတေးလျသီးခြားတီးဝိုင်းထဲတွင် The Scientists, Cosmic Psychos နှင့် Feedtime တို့ပါဝင်သည်။ သူတို့သည် grunge၏ ရှေ့ပြေးများဖြစ်သည်ဟု ကိုးကားခံရသည်။ သူတို့၏ဂီတသည် Seattle ဖြစ်ရပ်တွင် လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ Neil Youngသည် Pearl Jam နှင့် ဖျော်ဖြေတီးခဲ့ပြီးနောက် Mirror Ball album ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်အချို့သည် သူကို Godfather of Grunge ဟုအမည်ပေးကြသည်။ သူ၏ distorted guitar နှင့် ထူးခြားသည်မှာ Rust Never Sleeps albumဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင် ရုပ်သိမ်းခံရသည်။ Redd Kross တီးဝိုင်း၏ Neurotica album သည်လည်း လွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ Jonatham Poneman ဆိုထားသည်မှာ Neurotica Seattle ဂီတအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့၏ ဘဝကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။
grunge တီးဝိုင်းများသည် ၁၉၈၀နောက်ပိုင်းတွင် mainstream သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ Soundgarden သည် ၁၉၈၉တွင် A&M Records တွင် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံး grunge တီးဝိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ Nirvana သည် Aberdeen, Washingtonမှဖြစ်ပြီး ၁၉၈၉ တွင် Bleach album ထွက်ပြီးနောက် major label ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Nirvana သည် ၁၉၉၁ စက်တင်ဘာတွင် Nevermind albumထွက်လာခဲ့သည်။ album သည် အရေးကြီးသော အောင်မြင်မှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ MTV တွင် ပြသခြင်းခံရသည်။ Nevermind သည် ၁၉၉၁ ခရစ်စမတ်တွင် အချပ်ရေ ၄၀၀၀၀၀ ကျော်ရောင်းရသည်။ ၁၉၉၂ ဇန်နဝါရီတွင် Nevermind Billboard 200 တွင် နံပါတ်၁နေရာတွင်ရှိသော pop superstar Michael Jackson၏ Dangerous နေရာတွင် အစားထိုးခြင်းခံရသည်။ Nevermind ၏အောင်မြင်မှုသည် ဂီတစက်မှုဇုံကို အံဩစေခဲ့သည်။ Nevermind သည် grungeတွင် ကျော်ကြားရုံသာမက ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးအရ alternative rock တွင် အလားအလာရှိလာခဲ့သည်။ glam metalသည် rock ဂီတကို လွှမ်းမိုးနေချိန်တာင်ယဉ်ကျေးမှုအရ ဆက်နွယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ grunge သည် mainstream ၌ ရောင်းချနိုင်ရန် စီးပွားရေးပရိတ်သတ်များ များပြားလာခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုအပိုင်းအစများဖြင့် ခိုင်မာစေခဲ့သည်။ အခြားgrunge တီးဝိုင်းများသည် Nirvana ၏အောင်မြင်မှုနောက်သို့ လိုက်ရှိခဲ့သည်။ Pearl Jam သည် ၁၉၉၁ ဩဂုတ်လတွင် Ten album ထွက်လာခဲ့သည်။ album၏ ရောင်းအားမှာ တစ်နှစ်ကြာပြီးမှ ရောင်းအားမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ နှစ်ဝက်တွင် “Ten” album သည်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့ပြီး Billboard chartsတွင် နံပါတ်၂နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
↑ (2015) Desperate Times: The Summer of 1981. Fluke Press. ISBN 978-1938476013။
↑ Brett Buchanan။ BEN SHEPHERD TRASHES GRUNGE LABEL, SAYS SOUNDGARDEN WERE NEVER A GRUNGE BAND။ AlternativeNation.net။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Grunge&oldid=396409" မှ ရယူရန်